Pevhu 3 akagadzirira kutamba paGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Takatarisana nekumisikidzwa kukuru, iri nezve mutambo wevhidhiyo Pevhu 3 izvo zvichave zviripo kune Linux, Mac uye Windows kubva kuzvitoro senge Humble Store uye zvakare kubva chiutsi. Mushure meDungeons 2 ikozvino vese vateveri veiyi nhepfenyuro vachakwanisa kunakidzwa nenhau dzeichi chimwe zita chaunogona kuona mune yakadzamidzirwa vhidhiyo maunogona kuona 3 maminetsi akakwana kuti uwane pfungwa yezve ichave usati watenga iyo muzvitoro zvataurwa.
Nenzira varidzi vanogashira imwezve kopi sechipo chema Dungeons 2, saka zvinonakidza kuziva ichi kupihwa. Kunakidzwa kwevanoda magomba uye ino nyika yedhiabhori ine akasiyana mamishini ayo atinogona kupindira mune ino saga. Zvemashiripiti zvisikwa, zvisingawanzo zvisikwa, orcs, succubi, zombies, elves, uye nerima pasi pevhu nyika yaunogona kuti unakirwe mukukunda kana yevakawanda makwikwi. Zvese zvaunoda kuti usunungure rako rakasviba divi nekukunda anopikisa mauto uye kukanganisa nyika. Ehe, pano hausi gamba, asi munhu akaipa! Imwe pfungwa yekuona iyo Dungeons inotitorera isu uye kuti vazhinji vanofarira kubuda mune zvakajairika. Zvakare muDungeons 3 tinogona kunakidzwa neimwe nhau uye kugadzirisa. Semuenzaniso mune maneja nekumwe kunatsiridza, nyika hombe uye kugadzirisa mune iyo simulator ine yakashanda RTS modhi. Nyowani mumavara, makumi maviri mamishini easina-mutambi mishandirapamwe inovimbisa maawa emutambo uye hukuru hwakanyanya. Isu zvakare tine nyowani co-op modhi yevatambi vaviri uye mamwe makamuri uye akasiyana hunyanzvi.
Unotoziva kuti kana uchifarira, pakutanga ndakusiyira chinongedzo chechitoro ValvesSteam pekutenga, semazuva ese. Asi iwe unogona zvakare kuiwana kuHumble Store uye kuGreen Man Gaming. Iwe unozowana zvirokwazvo zvimwe zvinopihwa senge ndataura kana zvimwe zvemukati senge zvinowedzera sountracks, zvimwe zvirimo, uye iyo bhonasi kopi yeDungeons 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Pevhu 3 akagadzirira kutamba paGNU / Linux
Ichokwadi ndechekuti mutambo unotaridzika chaizvo. Iyo inofanirwa kutariswa mukutenga mune ramangwana. To favorites!